I-DHMI 9 Imemezela Inkomba Yezinyanga zonke - RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraI-DHMİ 9 Imemezela Izibalo Zenyanga
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş I-06 Ankara, Isifunda sase-Central Anatolia, JIKELELE, Izikhumulo zezindiza, Highway, HEADLINE, TURKEY 0
dhmi imemezela izibalo zanyanga zonke
I-General Directorate of State Airports Authority (DHMI), unyaka we-2019 wonyaka ka-Septhemba wezindiza ezindiza, abagibeli kanye nezibalo zezimpahla.
Ngokulandelana, ngoSepthemba; Inani lokuhamba kwendiza nokuhamba ngalo esikhumulweni sezindiza bekuyi-77.365 yezindiza zasekhaya kanye ne-75.465 yezindiza zomhlaba wonke. Ingqikithi yethrafikhi yendiza efikisiwe ifinyelele ku-194.923 ngokudlula ngokweqile.
Ngo-September, Turkey ukukhonza yasekhaya umgibeli traffic ezikhumulweni zezindiza yonkana 8.668.089, 12.240.602 kwaba ngamazwe umgibeli traffic. Ingqikithi yezithuthi zabagibeli enabagibeli abaqondile abahambayo yabonwa njenge-20.929.426.
Izindiza zezindiza (imithwalo yempahla, imeyili kanye nemithwalo) ithrafikhi; Kusukela ngoSepthemba, amathani we-81.084 emigqeni yasekhaya namathani we-244.718 emigqeni yamazwe omhlaba afinyelela inani lamathani we-325.802.
I-9 Monthly (JANUARY-SEPTEMBA) I-AIRCRAFT, IPHASIMENDE KANYE NOKUTHENGA KWEMOTO
I-2019 kusukela ekupheleni kukaSepthemba; ukuthwala izindiza ukuya nokubuya esikhumulweni sezindiza bekuyi-636.771 ezindizeni ezihamba ekhaya kanye ne-554.646 ezindizeni zomhlaba wonke. Ngakho-ke, umthamo ophelele wezindiza ufike ku-1.550.588 ngokudlula ngokweqile.
Turkey 76.431.401 we jikelele ezifuywayo umgibeli traffic zezindiza, lapho ngamazwe umgibeli traffic ngalesi sikhathi 84.828.052 abagibeli zokuthutha umphakathi ngqo kanye Imininingwane umgibeli traffic wema ngasemnyango 161.482.868.
Izindiza zezindiza (imithwalo yempahla, imeyili kanye nemithwalo) ithrafikhi; Amathani we-626.460 emigqeni yasekhaya namathani we-1.865.412 emigqeni yamazwe.
Ukufika ngezindiza nokuhamba ngezindiza e-Istanbul Airport ngoSepthemba kube yi-9.369 ezindizeni ezifuywayo, i-28.960 ezindizeni zomhlaba wonke kanye nase-38.329 ephelele. Isamba sabagibeli be-1.483.994, kufaka phakathi i-4.783.667 emigqeni yasekhaya kanye ne-6.267.661 emigqeni yamazwe omhlaba, satholakala.
Esikhumulweni sezindiza i-Atatürk, lapho kuqhubeka khona imisebenzi yezindiza ejwayelekile nokuhamba ngezimpahla, ukuhamba kwezindiza kwe-2019 kutholakale ngesikhathi sikaJanuwari-Septhemba nge130.229. Esikhumulweni sezindiza i-Atatürk, abagibeli be16.072.534 basebenza ngesikhathi sikaJanuwari-Ephreli kuze kube kuvulwa iSikhumulo Sezindiza i-Istanbul.
Izindiza ze-222.435 kanye ne-35.574.890 umgibeli waba sezindiza e-Istanbul Airport ngezinyanga eziyisishiyagalolunye. Ngakho-ke, ithrafikhi yezindiza ze-352.664 kuphela kanye nethrafikhi yabagibeli be-51.647.424 ezitholakele kulezi zikhumulo zezindiza ezimbili.
I-9 njalo ngenyanga i-AIRCRAFT, IPHASIMENDE NOKUTHENGA IZITOLO
Isibalo sabagibeli abasebenzela ezindizeni zanyanga zonke ze-9 sidlula isigidi se-47 kwizikhumulo zezindiza ezibanzi, lapho ithrafikhi yamazwe omhlaba isindayo. I-16.035.492 yabagibeli emigqeni yasekhaya, i-31.556.514 emigqeni yamazwe aphesheya; ukuhamba kwezindiza bekuyi-121.877 ezindizeni ezifuywayo kanye ne-184.790 ezindizeni zomhlaba wonke.
Imininingwane ye-9 yanyanga zonke yezikhumulo zezindiza zethu ezikhungweni zezokuvakasha imi kanje:
I-Izmir Adnan Menderes Airport yathola izinsizakalo ze-6.875.544 ezindizeni ezihamba ezindlini, izinsiza ze2.686.942 ezindizeni zomhlaba wonke kanye nesibalo sabagibeli be-9.562.486.
Esikhumulweni sezindiza i-Antalya Airport, kuthunyelwe inani labagibeli be-5.399.599, kufaka phakathi abagibeli be-23.929.236 basekhaya kanye nabakwa-29.328.835.
Esikhumulweni sezindiza saseMuğla Dalaman, ithrafikhi ephelele yabagibeli be-1.280.104, kufaka phakathi i-2.711.541 ezindizeni ezihamba ekhaya kanye ne-3.991.645 ezindizeni zomhlaba wonke.
Isikhumulo sezindiza iMuğla Milas-Bodrum sinenombolo yabagibeli basekhaya i-2.089.603 kanye nenombolo yabagibeli bamazwe aphesheya i-1.702.491. Sekukonke abagibeli be-3.792.094 basebenzisiwe.
Isibalo sabagibeli basekhaya nabasemazweni aphesheya eGazipaşa Alanya Airport sasiyi-390.642. Inani labagibeli lifinyelele ku-526.304.
I-DHMI izisa abahamba ngezinyawo, izindiza nezinombolo ze-Cargo ngoFebhuwari 06 / 03 / 2019 I-General Directorate of State Airports Authority (i-DHMI) yamemezela izibalo zezindiza, izigibeli zezimoto nezokuthutha ngoFebhuwari ngo-2019. Ngakho-ke, ngoFebhuwari 2019; Ukufika komgwaqo wendiza nokuthutha ezikhungweni zezindiza kwakungu-60.198 emigqeni yasekhaya kanye ne-37.037 emigqeni yamazwe ngamazwe. Ukuhamba ngokweqile kwelokuhamba ngenyanga efanayo kwaqalwa njenge-33.253. Ngakho-ke, isithuthi sezindiza esiphelele sisebenza emgwaqweni we-air kufikile i-130.488 ne-overpasses. Izikhumulo zezindiza yonkana Turkey kulenyanga 7.618.937 umgibeli yasekhaya womgwaqo, kuyilapho ngamazwe umgibeli traffic kwaba 5.131.874. Ngakho, ngenyanga enombuzo, yi-birlikte
I-DHMI Imemezela Izibalo ZikaJulayi 07 / 08 / 2019 I-General Directorate of State Airports Authority (DHMİ), 2019 ngonyaka kaJulayi, izindiza zezindiza, abagibeli kanye nezibalo zezimpahla kumenyezelwe. Ngokulandelana, i-2019 ngoJulayi; Ukuhamba ngezindiza ukuya nokubuya esikhumulweni sezindiza bekuyi-79.311 ezindizeni ezifuywayo kanye ne-83.547 ezindizeni zomhlaba wonke. I-traffic overflight ngenyanga efanayo bekuyi-44.660. Ngakho-ke, ithrafikhi ephelele yomoya osetshenziswe ku-airway ifinyelela i-207.518 ngokudlula ngokweqile. Izikhumulo zezindiza yonkana Turkey kulenyanga 9.122.161 umgibeli yasekhaya womgwaqo, kuyilapho ngamazwe umgibeli traffic kwaba 12.897.411. Ngakho-ke, ithrafikhi ephelele yabagibeli enabagibeli abaqondile abahambayo enyangeni eshiwo ...
Izikhumulo zezindiza State Authority Imenenja Funda ngoJanuwari, 'DHMİ Running Turkey Flying' 29 / 01 / 2019 Izikhumulo zezindiza State Ukuphathwa Imenenja futhi Usihlalo Funda ngoJanuwari, wanika ulwazi mayelana ezisaqhubeka share ku-akhawunti olusemthethweni Twitter. Lapha abelana Imenenja ka-January: Izwe lethu, ekuzuzeni isinyathelo esibalulekile emkhakheni of civil aviation ezibonisa ukukhula esheshayo e-Europe, izwe liye izikhathi eziningana zafinyelela eqophelweni lapho kuyahlonishwa amehlo of civil aviation. izinqubomgomo zokuthutha isicelo ekuphishekeleni lokhu impumelelo ngokungangabazeki ngonyaka odlule 17 ingcaca yayiphumelela. Ngingasho ukuthi izwe lethu lihlome izikhumulo zezindiza zanamuhla nezikhumbuzo kunamanye amazwe emhlabeni. I-DHMİ iyinhlangano yomhlaba wonke ngokusebenza nokuthuthukiswa kwengqalasizinda kwezobuchwepheshe nemisebenzi emikhulu eyenziwe Hay
Isikhulu-Sen Hunger-Poverty umemezela inyanga ka-Ephreli Amanani 09 / 05 / 2017 Officer-Sen indlala-ubumpofu Imemezela Apreli izibalo: Officer-Sen nyanga sasesiqhutshelwa "yi-indlala-ubumpofu" ucwaningo, indlala 4 zabantu embundwini for umndeni e-Turkey 1.725,18 TL, kwelizinga lebuphuya eyayibekwe at 4.715,65 TL. Officer-Sen ngo-Ephreli, ngokuvumelana ucwaningo indlala-ubumpofu ngenjwayelo nyanga indlala Confederation 4 1.725,18 zabantu embundwini for umndeni e-Turkey TL, kwelizinga lebuphuya wayezimisele njengoba 4.715,65 ngayinye. Ngokusho kocwaningo, amanani okudla ngo-Ephreli uma kuqhathaniswa no-March isilinganiso se-0,49'lu sokunciphisa amaphesenti kwaba nakho. Ukwanda okukhulu ngo-Ephreli kuyi-utamatisi, nokwanda kwe-61,03 yüzde
Isikhulu-Sen Hunger-Poverty umemezela uNomboro kaMeyi 08 / 06 / 2017 Officer-Sen indlala-ubumpofu Imemezela Inyanga Meyi Izinombolo: Officer-Sen ngu wayevame ukuqhuba izifundo nyanga zonke, "kusho i-indlala-ubumpofu" Kwangathi imiphumela yocwaningo lwenyanga, indlala 4 zabantu embundwini for umndeni e-Turkey 1.696,35 TL, kwelizinga lebuphuya eyayibekwe at 4.721,80 TL . Officer-Sen Confederation siqhutshwe njalo njalo ngenyanga nge ucwaningo indlala-ubumpofu Ngokusho emndenini eTurkey ngo-May 4 1.696,35 £ indlala nombundu, kwelizinga lebuphuya wayezimisele njengoba 4.721,80 ngayinye. Ngokombiko, amanani okudla ngoMeyi ancipha ngamaphesenti angu-1,67 uma kuqhathaniswa no-Ephreli. Ukwanda okukhulu kuMeyi kuyi-yüzde
I-DHMI izisa abahamba ngezinyawo, izindiza nezinombolo ze-Cargo ngoFebhuwari
I-DHMI Imemezela Izibalo ZikaJulayi
Isikhulu-Sen Hunger-Poverty umemezela inyanga ka-Ephreli Amanani
Isikhulu-Sen Hunger-Poverty umemezela uNomboro kaMeyi
UMnyango Wezambiso Uzisa Amanani Okungenisa Nokuthumela Izinto
I-DHMI Yemezela Izindiza, I-Passenger ne-Cargo Traffic ngonyaka we-2018
I-DHMI izisa izimoto zezindiza, izithuthi zabagibeli nezokuthutha ngoNovemba
I-DHMI Ibika Izibalo Zezindiza, Izigibeli Zezivakashi nezokuthutha ngoMashi
I-DHMI ibika '5 74 Million People Fly ngenyanga'